Free Windows DVD burner: Top 10 Free DVD Burners maka Windows
DVD burner maka Windows
1. DVD burner maka Windows 10
2. MP4 ka DVD burner maka Windows 10
3. AVI ka DVD burner maka Windows 10
4. Play DVD on Windows 10
5. DVD Onye kere maka Windows 10
6. Free DVD burner maka Windows
7. tost maka Windows
8. breeki aka maka Windows
9. DVD Onye kere na Onye Okike maka Windows 10
10. Disc-ere Ọkụ Software maka Windows
11. Disc burner maka Windows 10
Wondershare DVD Creator Bụ ọkachamara na-eji enyi na enyi DVD ọkụ ngwá ọrụ. Ị nwere ike iji ya na-eme ihe dị ịtụnanya DVD na wuru na-DVD menu ndebiri, na ike a kediegwu ngosi mmịfe na foto na ndabere music.
Anyị maara na DVD e kere eke aghọwo a siri ike ọrụ n'ihi na nke interface nke na-eme ka o sie ike iji. Ma, ebe a ị ga-ahụ kasị mma, free na mfe iji DVD ọkụ na ngwá ọrụ windows na-enye nza nke atụmatụ na ole na ole clicks gị òké. Niile n'okpuru ngwá ọrụ na-onwe nwalere site anyị ọkachamara na mgbe na na njedebe nke ya, anyị kwa, enyewom unu n'elu 10 na-atụ aro ịhọrọ site na.
Nkebi nke 1: Top 10 FREE DVD Creators maka Windows
Part 2: More Option nke onye Advanced & Professional DVD Creator
1. Windows DVD Onye kere
A Microsoft ngwaahịa maka windows ọrụ nke na-enye ọtụtụ adịchaghị atụmatụ dezie na ike a mara mma video DVD. Ọ nwere nza ndebiri welie n'ụlọ mere video n'ime a ọkachamara Hollywood nkiri dị ka DVD. The Windows DVD onye na-enye zuru ezu atụmatụ ike a DVD na onyonyo, na vidiyo ọnụ na onyonyo, na vidiyo nwere ike ndokwa ka kwa site ọrụ mkpa.
Mụta ihe banyere Windows DVD Onye kere >>
2. WinX DVD chepụtara
A adịchaghị DVD Creator nke bụ free download ma na-enye niile atụmatụ nke a pro ọrụ mkpa dezie videos, oyiyi ike a adị DVD. WinX DVD chepụtara bụ a free DVD Creator nke nwere ike tọghata ọtụtụ Video formats n'ime adabara DVD usoro. Onye ọrụ nwekwara ike ịgbakwunye isi na ndepụta okwu ka ya / ya video site ngwá ọrụ a. The WinX DVD chepụtara na-emepụta elu àgwà 4.3 G bụ ihe na-erughị 1 hour nke bụ ngwa ngwa karịa ndị ọzọ windows dabeere DVD Creators.
3. DVD kpatụ aka gaa na
Ọ bụrụ na ị chọrọ a free na mfe iji software dezie na ike DVD na obere mgbalị, mgbe ahụ, DVD kpatụ aka gaa bụ a mma nhọrọ maka gị nhọrọ. DVD kpatụ aka gaa bụ a free na mfe iji interface na nza nke atụmatụ maka Windows ọrụ. The software na-enye dịgasị iche iche nke video formats dezie na kwa-erekwa ọkụ DVD na-alụbeghị di click na obere oge. The software na-atụmatụ ike menu na DVD ka mfe ohere nke ọ bụla media faịlụ site na DVD ọkpụkpọ.
Mụta ihe banyere DVD kpatụ aka gaa na >>
DVD styler bụ ihe Open isi iyi software ike ọkachamara na-achọ DVD si na dị nnọọ ole na ole clicks na-erughị mgbalị. Ọ bụ free software nke na-emepụta a apa ọkụ Media faịlụ n'ime DVD. The DVD styler enye ọtụtụ atụmatụ dị ka menu ndebiri, ike ngosi mmịfe, ma tinye multiple sobtaitel na ọdịyo egwu. Ọ nwekwara ike mbubata oyiyi dị ka ndabere akwụkwọ ahụaja nke menu maka DVD. Ọ na-akwado niile ụdị video ma ọ bụ ọdịyo formats igbu ma detuo ha n'ime DVD na obere oge. Na kasị adọrọ mmasị na mma mma banyere DVD styler bụ na ọ na-eji media faịlụ na-enweghị re-ngbanwe dị otú ahụ dị ka MPEG na VOB faịlụ-ewe oge re-encode n'ime DVD File.
Mụta ihe banyere DVD Styler >>
5. Video ka DVD Ntụgharị
Koyote Soft Free Video ka DVD Ntụgharị bụ a nkịtị ma a siri ike software maka e kere eke nke DVD maka Home DVD ọkpụkpọ. Ọ bụ a ngwa na mfe ngwá ọrụ iji tọghata video na ozugbo ọkụ ha n'ime DVD. Dị ka dị ka aha ya ọ atọghata video chọrọ format dị ka kwa onye ọrụ na iwu ma ọkụ nke video kpọmkwem n'ime DVD. Ọ bụ ezie na o nwere ole na ole atụmatụ dezie na ewepụtụ dị ka nhọrọ ma ọ bụ ka ike software maka DVD Creation na nkeji.
Mụta ihe banyere Video ka DVD Ntụgharị >>
Star apa ọkụ bụ a free oghe isi ngwá ọrụ iji nke na-akwado niile ụdị DVD / VCD media faịlụ ike na-eweta Video DVD na ụdị ọ bụla nke DVD Player ma ọ bụ onye so dee. Ọ na-enye nkwado zuru ezu ịgbakwunye ụdị ọ bụla nke media faịlụ ma ọ bụ data isure n'ime DVD. The StarBurn nwekwara atụmatụ idekọ na desktọọpụ na ịzọpụta video na chọrọ usoro. Ọ bụ a kasị mma DVD Onye Okike gbakwunyere na-ere ọkụ na ngwá ọrụ windows ọrụ nke na-akwado niile agadi ọhụrụ windows version dị ka xo ka windows 8.
Mụta ihe banyere Star ọkụ >>
Bombono DVD bụ DVD authoring software maka PC si ike na ọkụ DVD si na obere mgbalị na nanị Dọrọ na dobe usoro. The Bombono DVD akwado Real WSIWYG menu nchịkọta akụkọ na ndụ thumbnails na mfe tinye sobtaitel ka onye ọ bụla etiti nke video. Omenala interface ma ọ bụrụ na software bụ n'ezie mfe ịghọta ya-eme ọrụ na obere oge tụnyere ndị ọzọ free DVD creators.
Mụta ihe banyere Bombono DVD >>
8. Sothink DVD Movie Onye kere
A Al ke kiet ke otu DVD authoring ngwá ọrụ, Sothnik DVD nkiri onye na-enye nza nke atụmatụ na aka gị na dị nnọọ ole na ole clicks na icho mma videos na omenala mere ndebiri na inbuilt mmetụta. The kpamkpam free video edezi na-ere ọkụ ngwá ọrụ dị ebube n ya obiọma na-enwe ndabere atụmatụ maka DVD si. The Sothnik DVD bu Onye meworo a ngwa ngwa nkiri edezi na-ere ọkụ ngwá ọrụ. Ị nwere ike mfe icho mma gị na vidiyo na ya inbuilt ndebiri maka menu.
9. GMT DVD Onye kere
A freeware DVD onye ngwá ọrụ bụ n'ihi na windo ọrụ bụ nke yiri ibudata na mfe iji. The software dị mma dị ka a DVD burner ma DVD edezi atụmatụ ndị bụghị ọtụtụ ezi maka ojiji. The GMT DVD Onye kere atụmatụ ezi DVD ka DVD Copy na DVD image Ndinam na usoro diski ike. Ị nwere ike mfe Detuo gị DVD si na ngwá ọrụ a na nwekwara ike mfe ọkụ ha ọzọ DVD.
Mụta ihe banyere GMT DVD Onye kere >>
10. daemon Ngwaọrụ Lite
Nke a daemon ngwá ọrụ dị mma software ọkụ gị Data faịlụ ka CD ma ọ bụ DVD. Ọzọkwa a ngwa nwere ike ịmepụta gị DVD ma ọ bụ CD Image faịlụ & zọpụta ya ka * .iso format ma ọ bụ ndị ọzọ dị ka ọchịchọ gị. Ngwá ọrụ a-enyere onye ọrụ nkwado ndabere na mpaghara e data faịlụ e media faịlụ ka onyinyo usoro. I nwekwara ike efego oyiyi faịlụ dị iche iche mebere draịva, nke mere na i nwere ike iji ya na-enweghị na-ere ọkụ gị ihe oyiyi faịlụ ka CD ma ọ bụ DVD.
Mụta ihe banyere daemon Ngwaọrụ Lite >>
Part 2: More Option nke onye Advanced & Professional DVD burner
Na-atụ aro 1: Wondershare Video Converter Ultimate
Ọ bụ nnọọ ngwá ọrụ dị ike nke pụrụ idozi niile video-metụtara nsogbu rụọ ọrụ nke ọma, dị ka ọkụ DVD, edezi, converting, nbudata, ndekọ, nkwanye, wdg
• Ọkụ video fọrọ nke nta ke ọ bụla usoro, hazie gị DVD na free DVD menu ndebiri.
• Dezie, Eme & hazie gị Videos File.
• Tọghatara N'ime 150 Formats gụnyere 4K / 3D.
• APEXTRANS technology atọghata faịlụ 30x ngwa ngwa karịa osompi ngwaahịa.
• Download videos si ọzọ 1000+ video nkekọrịta na saịtị na One Click!
• Easily idekọ nkwanye online videos
• gụgharia Your Media ka TV.
• Nyefee Video enweghị eriri USB.
Akwado os: Windows 10/8/7 / XP / Vista / 2003, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6
DVD burner Comparison:
Na-atụ aro 2: Wondershare DVD Creator maka Windows
Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka ngwá ọrụ iji mee ka gị na pesonel videos ọzọ ndị ọkachamara na Hollywood ịke mgbe ahụ anyị ga nwere ike ikwu Wondershare DVD Creator. Ọ nwere pụrụ iche uru n'elu niile DVD ọkụ ngwaọrụ n'elu. O nwere ọtụtụ inbuilt ndebiri maka gị DVD NchNhr. The ọkụ usoro bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa dị ka ị na-atụ anya na ị dịghị mgbe a ga rapaara n'ihi na gị DVD si na-ịla n'iyi.
Nkwado na-ere ọkụ vidiyo na ọ fọrọ nke nta ọ bụla na-ewu ewu video dị ka AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, wdg
Ọkụ videos ka a ọkachamara DVD na 40 + kasị mma e mere menu ndebiri.
Hazie videos na menu ndebiri dị ka ọchịchọ gị tupu na-ere ọkụ DVD.
Mee na-akpa ọchị foto ngosi mmịfe ịkọrọ enyi na ndị ikwu.
Olee otú Ọkụ Video ka DVD na Wondershare DVD Creator maka Windows (Windows 10 gụnyere)
Mgbe nbudata na na na wụnye a Wondershare DVD-ere ọkụ ngwá ọrụ, dị nnọọ ịdọrọ na dobe faịlụ gị na ngwa, ma ọ bụ pịa "Import" na interface.
Dezie Video ma ọ bụ NchNhr Templates
Pịa "Pensul" akara ngosi na-gbapụta ndị video edezi window, ma ọ bụ pịa NchNhr taabụ n'elu menu nke interface itinye na dezie menu ndebiri.
Ọkụ Video ka DVD maka Windows
Pịa "Ọkụ" button na ala, ma họrọ gị chọrọ DVD format si DVD diski, DVD na nchekwa ma ISO faịlụ.
Dị pịa ebe a iji nweta ihe ọmụma zuru ezu Nduzi na Olee otú Jiri Wondershare DVD Creator maka Windows >>
5 Atụmatụ maka Windows Media Player update
6 Kasị-jụrụ ajụjụ na iji HTC mmekọrịta na Windows 8/7 / XP
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site na Windows XP
Bubata kọntaktị Outlook Express ka Windows Live Mail
Olee otú Ọkụ MP4 ka DVD na Windows 10
> Resource> Windows> Top 10 Best Free DVD Burners maka Windows